प्रियंका चोपडालाई बिना बट्नको कोटमा देखेर, फ्यानहरुले भने – 'जतिबेला पनि देखाउनै पर्छ र ?' - हाम्रो देश
ग्लोबल स्टाइल आइकन बनेकी बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको ड्रेसिंग सेन्स एकदम अचम्मको र बहुमुखी छ। प्रियंका भारतीय शैलीको कपडाहरूमा अनुग्रह र भव्यताका साथ देखा पर्छिन् किनभने उनी बोल्ड जोखिमपूर्ण पोशाकमा निर्धक्क भई लागाउछिन।
ग्लोबल स्टाइल आइकन बनेकी बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको ड्रेसिंग सेन्स एकदम अचम्मको र बहुमुखी छ। प्रियंका भारतीय शैलीको कपडाहरूमा अनुग्रह र भव्यताका साथ देखा पर्छिन् किनभने उनी बोल्ड जोखिमपूर्ण पोशाकमा निर्धक्क भई लागाउछिन । जे होस् प्रियंकाको जादु र रेड कार्पेटमा ग्लैमरस पोशाक प्रायः चर्चा बन्न पुग्छ, तर धेरै व्यक्तिको भनाइ छ कि उनको विदेश जानाले शैली पूर्णतया बदलिएको छ।
आजकल प्रियंका धेरै नै असहज पातलो फिट सिल्हूट्स मात्र लगाइरहेकी छिन्, अभिनेत्रीले बाहिरी पोशाकहरूको छनौट यति बोल्ड छ कि चाहेर पनि उनको प्रशंसा गर्न गाह्रो छ। हामीले त्यस्तै केही कुरा देख्यौं जब प्रियंकालाई एउटा कार्यक्रममा बिना बट्न कोटमा देखियो।
वास्तवमा, पूरै मामला २०१९ को हो, जब प्रियंका चोपडालाई लस एन्जलसमा ब्यूटीकॉन कार्यक्रममा स्पट गरिएको थियो। यस समयमा, प्रियंकाले उनीसँग मोनोक्रोमेटिक पावर सूट सेट रोजेकी थिइन, जसको खुलासा निकै चर्चा भएको थियो ।
सुटिङको क्रममा प्रियंकाको पति निक घाइते
१० सालदेखि गम्भिर रोगसँग जुधिरहेकी छिन् ‘दि कपिल शर्मा शो’की…
चलचित्रकर्मी चेतन कार्कीको कोरोना संक्रमणबाट नि’धन
प्रधानमन्त्री बन्न नपाएपछि नक्कली शेरबहादुर देउवा रिसाए! भने- सबलाई कुकुर…